ORINASA AFAKA HABA Miha vitsy ireo mpiasa mbola miasa
Tsy manana fiara fitaterana ny ankamaroan’ireo orinasa afaka haba eto amintsika. Mandeha taxi-be avokoa ny mpiasa ao aminy izay tena nahatsiaro
antontanisa marina ary hitondrana vahaolana maharitra amin’ireo politikam-pampandrosoana hoentin’ny fanjakana mba hanatsara ny faripiainan'ny tokantrano Malagasy. Nanentana ny tokantrano izay notsongaina hotsidihina ny Tale jeneralin’ny Instat, Romalahy Isaora Zefania mba handray tsara ireo mpanadihady ary indrindra hamaly amin’ny fahamarinana ireo fanontaniana rehetra apetraka. Tsiahivina fa mbola antontanisa tamin'ny taona 2012 no ampiasain'ny INSTAT amin'izao fotoana izao hijerena ny faripiainan'ireo tokantrano Malagasy izay tena mandiso ny drafi-pampandrosoana rehetra satria sady tsy manaraka ny zava-misy marina izany no tsy mifanaraka intsony amin’ny fitombon’ny mponina. Ankoatr’izay dia ho fanitsiana ny mari-drefy mahakasika ny fahantrana no antony hanaovana ity fanadihadiana izay takian’ny mpiara-miombon’antoka ity ka ny banky iraisam-pirenena no mamatsy ny vola izany. Nanambara ihany koa ny Tale jeneraly fa haharitra herintaona ny EPM 2020 izay hatao amin’ny tokantrano miisa 20 000 eto Madagasikara.